Ummakishi wakho ukhona ukukunceda | Martech Zone
NgeCawa, ngoJulayi 26, 2015 NgeCawa, ngoJulayi 26, 2015 Douglas Karr
Ndinabahlobo abaninzi abaqhuba iiarhente zentengiso kunye noochwephesha abaninzi bokuthengisa kuyo yonke i-Intanethi endibahlobo nayo. Andibaxi xa ndisithi eyona nto ikhathazayo mna nabanye siyifumana ngomsebenzi wethu yile ukumelana yamashishini esisebenza nawo.
Siye sahlawulwa ngokuza kubonana nabaxhasi kwaye sincede ngeendlela zabo zokuthengisa kuba bayazi ukuba banikwa iimpundu abazinikwa ngabo bakhuphisana nabo. Bayazi ngokuqinisekileyo ukuba le nto bayenzayo ayisebenzi. Nangona kunjalo, xa sihlalutya amacebo abo, siphanda abo sikhuphisana nabo, kwaye sibuye nesicwangciso… bayala:
Asinaxesha. - Ngokwenene? Ukuba awunalo ixesha lokugcina kwaye ukhulise ishishini lakho, bonwabile kukwehla kwengeniso onayo. Intlahla egqibelele!
Siyenzile loo nto kanye kwaye ayisebenzi. - Kanye. Akukho qhinga lexesha elide, akukho zenzo zibalaseleyo, akukho bungcali… khange isebenze kuba ubungayazi into oyenzayo.
Ndifunde inqaku elikwi-intanethi elathi alisebenzi. -Kunqaku ngalinye kwi-Intanethi kukho inqaku elilinganayo nelichaseneyo kwi-intanethi. Ndicinga ukuba ngumthetho wesithathu ka-Newton we-Intanethi. Yeka ukukhangela amanqaku avumelana nokuma kwakho.
Asinakukuhlawula oko. - Ngokwenene # 2? Awunakho ukugcina kunye nokukhulisa ishishini lakho? Undibizeleni?
Umzala wam, owenza iwebsite yeCawe yam, uthi… - Ewe, kunjalo. Ngengozi… andizange ndive ngeCawe ngaphambili.
Ishishini lethu lahlukile, abathengi bethu bahlukile. - akho abathengi banokuba… kodwa kungenxa yokuba intengiso yakho iyanuka kwaye awufumani uninzi lwabathengi abakhuphisana nabo.
Zonke ezi mpendulo ziguqulela kuzo:
Ukanti, usitsalele umnxeba wacela uncedo lwethu. Uziqinisekisile izikhombisi zethu. Kwaye ubone imbasa yomzi mveliso esiyifumeneyo. Kwaye-ukuba siyasilela, uza kusihlangula sobabini kwaye uxelele wonke umntu owaziyo ukuba ngumsebenzi ombi esiwenzileyo. Ngaba ngokwenene ucinga ukuba sifuna ukuba yenzeke?
Injongo yethu njengabacebisi bezentengiso kukubonelela ngamava ethu, ubuchule bethu, kunye nomnqweno wethu, ukunceda ishishini lakho liqhube ngcono. Ngaba singamisa ngapha nangapha size sisebenze? Kuyadinisa.
Ndihlala ndifuna ukwazi ukuba omnye waba bantu ufumene ingozi yemoto, nokuba bangaba baxelele umcimi-mlilo indlela yokubakhupha kakuhle emotweni, indlela i-EMT ekufuneka ibaphathe ngayo, kwaye nendlela uGqirha anokuphilisa ngayo kubo.
Kuza kuthatha ixesha elingakanani, kangakanani, kangakanani, njani, njani… isigaba esilandelayo semibuzo sichazwa, ngokuchanekileyo, ngokuchanekileyo ukuba isicwangciso kunye neziphumo ziya kuba yintoni. Kufana nokubuza umqhubi wenqwelo mafutha kunye neqela lakhe ukuba loluphi uhlengahlengiso kunye nezicwangciso azakuzisebenzisa ngaphambi komdyarho. Ukungahoyi iimeko zemozulu, abanye abaqhubi, amandla emoto… sixelele nje malunga neeyure ezi-4 ezilandelayo nayo yonke into eza kwenzeka kwilaphu ngalinye.
Ukuba unomcebisi wentengiso okuxelela, uya kubagxotha ngenxa yokulindela okuphosakeleyo kunye nokuxoka kuwe. Ukuba unomcebisi othembekileyo wentengiso, baya kukuxelela ukuba kuya kuthatha ixesha ukuphanda, ukuvavanya, kunye nokuhlengahlengisa inkqubo yakho ukufikelela kubuninzi bayo.
Sasinomthengi esasimenzela inkonzo kwaye saqhubeka iminyaka eliqela. Ngalo lonke ixesha, siza kunciphisa isicwangciso-qhinga sabo kwaye bacinge ukuba bagqibile… indawo inyukile, izikhokelo ziphezulu, umxholo ubhaliwe. Bayakuma kancinci ukuzibandakanya kwethu. Singabalumkisa ukuba kufuneka bagcine isicwangciso siqhubeka, kodwa bayayeka kwaye iqhinga liya kuthi xhaxhe. Emva koko babuyela kuthi, baqale kwakhona, bamelane nayo yonke into ebesiyenza, kwaye bakhalaze malunga neziphumo. Iziphumo ziya kuhlala ziqala kakubi kuba kuye kwafuneka siphinde sibeke amandla kunye nomdla kwi-brand yabo kwakhona.
Kwinyanga ephelileyo, sagqiba kwelokuba sahlukane. Sisenako ukufikelela kuzo kubahlalutyi kunye nokutyelelwa kwabo eziphilayo phantsi -29.26%.
Eyona nto ndiyithandayo. Iiveki ezimbalwa ngaphakathi kwaye lo ngumyalezo esihlala siwuva kunye nabathengi abachasayo. Bebelokhu bexhathisa lonke iqhinga ngalo lonke ixesha, ke ngokuqinisekileyo izikhokelo ziyanyanga. Oku kuqinisekisa yonke into ebebeyithetha lonke eli… into ebesiyicebisile ayisebenzi, abanye bathi kunjalo, kwaye abathengi babo bahlukile.
Okanye ngaba kunjalo?
Ndingatsho ukuba inkuthazo kunye nokwenza intengiso kunye nokuthengisa kwahluke kakhulu. Ukuthengisa kukhuthazwa ukuvala, ukuthengisa kuyakhuthazwa ukuqhuba ivolumu enkulu yezikhokelo ezingcono kwishishini lakho. Kutshanje sibhale malunga Ukuphazamiseka kwamashishini aqhutywa yintengiso kunye nentengiso ukuthetha ngqo naloo mbandela.
Nanku umzekelo ovela ngqo kwishishini lam. Sichithe uhlahlo-lwabiwo mali olungaqhelekanga ngokuzimasa nasekuxhaseni umsitho wonyaka kwiminyaka embalwa edlulileyo. Ibingaphezulu kwesiqingatha sebhajethi yethu yonyaka. Inkampani yethu ibivala iiakhawunti ezincinci ngaphandle kwengxaki, kodwa besingafikeleli kwiiakhawunti eziphambili ezizikhonkwane zabathengi bethu. Bendiye ndiqhubeke nokuvala amashishini amancinci ndenze kakuhle… okanye ndinokusebenzela ukondlalela izikhokelo ezimbalwa eziza kubakho kumsitho.
Sizimase lo msitho kwaye sichithe ngaphezulu konyaka sikhulisa iindlela ezimbini esidibene nazo apho. Kuthathe ngaphezulu konyaka, kodwa sivale omabini amashishini ngenxa yokuzibandakanya okukhulu kwimbali yenkampani yethu. Ukuba besigwebe nje iinzame zethu zokuthengisa ngenyanga okanye emva koko, ngesele sicinge ukuba kukusilela ngokupheleleyo.
Ngokuphosa umnatha omkhulu ngentengiso ekwi-Intanethi, uza kufumana izikhokelo ezininzi ngakumbi. Kwaye uninzi… nkqu uninzi… lwezo zikhokelo zinokuncanca. Kodwa uza kufumana ukufikelela kwiminenga ongekhe ube nethuba lokutsala. Iminenga ifuna nje ixesha elingakumbi lokuba wakhe igunya kwi-intanethi, wakhe ukuthembana ngokuzibandakanya okukhulu, ukukhulisa ezo ndibano, kunye nokuvala ukuthengisa ngakumbi.
Ekugqibeleni, umyinge wengeniso yakho nganye ekhokelayo uyonyuka, iindleko zakho zokhokelo ziya kuncipha, kwaye uya kuvelisa izikhokelo ezifanelekileyo.
Kuthatha ixesha nje. Khululeka kwaye sikuncede.
tags: kukhokelela ekumungeniizizathu zokuthengisaukumelana nentengiso